Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Birmingham oo meel kuwada afuray say uga arinsadaan arimaha agoonta
Jaaliyadda Birmingham oo meel kuwada afuray say uga arinsadaan arimaha agoonta
Maamulka Jaaliyada Birmingham ee wadanka UK iyo ururka OYSU qabtiisa Birmingham ayaa waxay isugu yimaadeen shir, taariikhdu marka ahayd 12kii bishan july halkaasoo ay dhalinta iyo maamulku kuwada afureen xafiiska ay jaaliyadu ku leedahay magaala Birmingham.
Shirkan ayaa waxaa lagu lafa guray qodobo dhawr ah oo ay kamid ahaayeen u diyaargarowga shirwaynaha jaaliyadaha reer ogadenia oo sanadkan lagu lagu qaban doon wadanka UK kaaso dhawrkii sanaba mar lagu qabto wadan wadannada aduunka ka mid ah.
waxaa kale oo ay ururka OYSU Birmingham iyo maamulka jaaliyadu isla falanqeeyeen sidii looga farxin lahaa agoonta reer ogadenia ciidan inagu soo fool leh ee dhamaadka bishan barakaysan ee Ramadan. Waxaa la isla qartay in lasoo diyaariyo zakaatul fitri oo isagu ah mid dadka reer ogadenia ay qoondeeyeen agoonta sanad walba markii lasoo gaadho bisha Ramadan. Dhalinta OYSU Birmingham ayaa iyaguna si gaar ah u soo bandhigay arimaha horyaala ka urur ahaan ee doonayaan inay soo bandhigaan mudooyinka soo socda.